AAM Trading Co.,Ltd-High quality and low price mini reaper binder-mini rice combine harvester -စပါးရိတ်စက် | Vootee
AAM Trading Co.,Ltd-High quality and low price mini reaper binder-mini rice combine harvester -စပါးရိတ်စက်
AAM Trading Company သည် သက္ကရာဇ် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီတစ်အဖြစ် တည်ထောင်ထားပြီး ရေလုပ်ငန်းသုံးဆိုင်ရာ၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံးဆိုင်ရာနှင့် လယ်ယာသုံး စက်နှင့် စက်အပိုပစ္စည်းများအား တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ဈေးနှုန်းမှန်ကုန်၊ ချိုသာစွာဖြစ် ဖြန်ဖြူး၊ ရောင်းချလျှက်ရှိပါသည်။
ထိုပြင် အရည်အသွေး ပြည့်မီသော ဒီဇယ်အင်ဂျင်၊ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်၊ ယိုးဒယားထုတ် KKK ပဲ့ထောင်အတိုင်၊ လယ်ယာသုံးလက်တွန်း ထွန်စက်၊ စပါး ရ်ိတ်သိမ်းစက်၊ ခြွေလှေ့စက် နှင့် ရေစုပ်ပန့်တွဲများသာမက ဒီဇယ်၊ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင် အပိုပစ္စည်းများအားလည်း ကိုယ်ကိုင်
This entry was posted in Business and tagged aam, high, price, quality, trading. Bookmark the permalink.
← Acoustic Architecture Co.,Ltd-Mineral Fiber Ceiling မျက်နှာကျက်
Aung Thein Than Co.,Ltd-Distributor of Hyundai Forklift 20 DF7 in myanmar →